Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynaha Denmark Iyo Kaalinta Halganeed ee Haweenka Ogadenia – W/Q Jamal Xukun
Shirweynaha Denmark Iyo Kaalinta Halganeed ee Haweenka Ogadenia – W/Q Jamal Xukun
Posted by ONA Admin	/ December 17, 2014
Waxay Shucuubta Caalamka ka midaysan yihiin, gaar ahaan qarnigan 21aad een ku jirno in Ummad iyo bulsho la arkaaba ay haweenkooda yihiin laf-dhabar nolosha iyo dhaq-dhaqaaqa bulshadaasi. Guud ahaanba, iyadoo la wada ogyahay in haweenku ay kamid yihiin labeenta bulshada, ayaa waxaa lagu qiimeeyaa bulsho walba siday nugulkeeda ula macaamisho. Bulshooyinku qaar way dayacaan haweenka halka qaar kalena ay fahmeen qiimiga ay leedahay inhaweenka la Tayeeyo Awoodooda ama “Empowerment” lagu sameeyo, sababtoo ah waxaa la ogaaday dhabnimada odhaahda ah “Nin walboo qiimi badan waxaa ka danbaysa haweenay qiimi badan.
Hadaba, waxaa isweydiin mudan halka haweenka S.Ogadenia ay bulshada uga jiraan? Mayihiin kuwo muuqda mise way xaqiranyihiin? Maxaa lagu rajo weynyahay inuu soo kordhiyo shir weynaha 1aad ee Haweenka Ogadenia. Dhamaan su’aalahan iyo kuwo kaloo halbowle ah ayaa ubaahan in la niqaasho oo qaybaha kala duwan ee bulshadu wax iska weydiiso si’ loo helo aragti la turxaan bixiyay oo bisil.
Sida ay kaga warqabaan inta u dhuun duleesha halganka, waxaa marag ma doonta ah in haweenka Ogadenia kaalin muhiim ah kaga jiraan bulsho-weynta iyo halganka gobanimo doonka ah ee lagu xoraynayo gayiga Soomaaliyeed ee Ogadenia. Halqabsiga JWXO ayaa waxaa kamida arayga “Isku-tashi” oo micno badan xambaarsan kolkii la sii kala dhig-dhigo. Markale, sida la ogyahay amaba madaxda halganku ay ku warbixiso, 95% halganka waxaa wada shacabka ku dhaqan gudahada gayiga Ogadenia gaar ahaan haweenka ayaa gun-dhig u ah. Waa haweenka cidda sooryaysa xaqleyaasha, waa iyaga kuwa ka qariya nacawgooda, waa iyaga kuwa boog dhaya dhaawaca naftii huraha, waa iyaga kuwa uga ba’a dhibka soo gaadha wiilasha raamaha leh, waa iyaga kuwa moraalka iyo niyadda u dhisa, waana haweenka kuwa dhibka gumaysigu inta badan uu ku habsado. Sidoo kale, haweenka ayaa ugu dhaq dhaqaaq wanaagsan kolka la milicsado halganka qurbaha kajira ha noqoto xag wacyi galin, abaabul, dhaqaale amaba fulin hawleed. Halganku “cheques” kama uu helo Washington iyo London, deeq kama soo gaadho Bill Gates iyo reer Al Maktoum-ka carbeed, laguma soo dhaweeyo barlamaanada Muqdisho iyo Nairobi, iska daa in baarlamaan lagu soo dhaweeyee wuxuu gumaysigu u qorsheeyay in laga dhigo Ogadenia xabsi madax banan. Sidaas aytahay, hadana halganku intaa wuu uun socdaa, tolloow yaa wada? Waa su’aal da’weyne.
Jawaabta rasmiga ah waxaad ugu tagi qaab dhaqameedka iyo hab raaca gumaysigu kula kaco shacabka khaas ahaan haweenka S.Ogadenia. Ogaansho gumaysigu ogyahay in xaqleyaasha iyo haweenka Soomaaliyeed ee Ogadenia ay isku yihiin ul iyo diirkeed, ayuu gumaystuhu go’aan ku gaadhay sida kaliya ee lagu soo afjari karo kacdoonka gobanimadoon aytahay fara xumaynta, dhaca, kufsiga, xidhayga iyo dilka gabdhaha iyo haweenka Ogadenia isagoo kolkaa ula jeeda aad gaadhsiisid bulshada dhaawac jidhka iyo maskaxdaba ah oo raad ku reeba oo aanan laga soo waaqsan. Waxaa arrintan tusaale kaaga filan hooyo Soomaaliyeed oo da’a, isla mar ahantaana ah xoolo dhaqato, in gumaystuhu indhaheedii baynaadda qoriga kaga soo tuuray, kadibna dil ugaystay ninkeedii iyo labo wiil ooy dhashay. Intaa kuma dayn ee wuxuu gumaystuhu gubay jidhkeeda iyo wiliba gurigii ay lahayd si’ quusi kobtii ugu danbaysay u dhan dhansiiyo shacabka Ogadenia. Waxay maanta hoyadaasi qoxooti kutahay dal aanan dalkeedii ahayn. Waa danbi qof loo gaysto kii ugu fool xumaa abid.
Waxay fal-danbiyeedyada caynkana ee gumaysigu kula kacayo shacabka Ogadenia ka baran karnaa inuu ku bartilmaad maysanayo halkuu u arko inay muhiim utahay geedi socodka halgan (oo ah haweenka). Waxaa sidoo kale iyana muhiim ah lana gudboon bulshada Ogadenia in la helo cod si dhab ah umatali kara dhibka guracan ee ku dhacaya nugulka bulshada khaas ahaan haweenka. Dunida maanta la joogo haddii aysan jirin aqoon, fir fircooni (Activeness) iyo ururnimo (Organisational) waxaa aadiyo aad u adag inaad cadkaaga dhacsato, haddii aad dhacsan kari weydo ma ay aha inaad filato in laguu soo rido amaba gacanta laguu soo galiyo.
Sidaas awgeedna ay lagama maarmaan tahay in la helo haweenka Ogadenia oo ku midaysan magac iyo manhajba, oo leh maamullo hawl fududeeya, oo abaabulan, oo fadhiyada caalamka uga matala haweenka iyo qadiyadda Ogadenia, oo samafal ka gaysta goobaha dhibanayaashu ku suganyihiin isla markaana kaalintoodii si aqoon iyo xirfadi ku dheehantahay u gudta.
Shirweynaha 1aad ee haweenka Ogadenia ee ka dhacaya Denmark 26-28/12/2014 ayaa imanaya afar sano iyo badh kadib kolkii isla wadankaa lagu aasaasay ururka dhalinyarada iyo ardayda Ogadenia ee OYSU oo intuu jiray halganka ku soo kordhiyay waxtar lixaad leh. Haddii haykalka iyo hanaanka ururka haweenka ee dhawaan looga dhawaaqi doono dalka Denmark lagu guulaysto sida loogu rajo weynyahay, waxuunan shaki kujiri doonin in halganku xawaare hor leh u gudbi doono taasina farxad galin doonto dhamaanba inta jacel guulsha gobanima doonka iyo xornimada Ogadenia.
W/Q Jamal Xukun